Talyaaniga oo dalbaday in wax lagala qabto Qaxootiga Soomaalida | raascasayrmedia.com
← Xarrakatul Shabaab oo ka hadashay dagaallo maanta ka dhacay Muqdisho iyo degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo
Madaxweynaha Soomaaliya oo shir jaraa’id maanta qabtay kagana hadlay dagaallada ka socda Magaalada Muqdisho →
February 25, 2011 · 7:43 pm
Talyaaniga oo dalbaday in wax lagala qabto Qaxootiga Soomaalida
Dowladda Talyaaniga ayaa ka codsatay Midowga Yurub in wax laga qabto qaxootiga Soomaalida ah ee gaaraya dalka Talyaaniga.
Wasiirka arimaha gudaha ee dowladda Talyaaniga Roberto Maroni ayaa ka codsatay Midoga Yurub in gacan laga siiyo wax ka qabashada qul qulka Qaxootiga Soomaalida ee galay dalka Talyaaniga kuwaasi oo kasoo tagaya dhibaatoyinka faraha badan ee ka taagan dalka Soomaaliya.
Roberto Maroni ayaa waxaa uu hadalkaani ka sheegay shir labo maalmood qaatay oo ay magaalada Brussels ee Xarunta dalka Belgium ku yeesheen wasiiradaha arimaha gudaha iyo cadaaladda ee Midow Yurub kaasi oo diirada logu saarayay sidii wax looga qaban lahaa qaxootiga ku dhibaataysan dalka Talyaaniga.
Wasiirka ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in rabshadaha ka jira dalka Liibiya ay saamay balaaran ku yeesheen qaxotiga Soomaaliyeed ee ku jira Xeryaha ku yaala dalka Libiya kuwaasi oo u tahriibaya wadamada Yurub iyagoo u maraya badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga.
Mr. Maroni ayaa waxaa uu sheegay in hadii aan wax laga qaban qul qulka Mujaajiriinta Soomaalida aysan dhibaatay doonin oo kaliya dalka Talyaaniga hase ahaatee uu sheegay in dalalka kale ay gaari doonaan.
Sidoo kale wasiirka arimaha gudaha ee dalka Spain Alfredo Perez Rubalcaba oo isna kulankaasi ka qayb galay ayaa wxaa uu shegay in Midowga Yurub looga baahanyahay in go’aan isku mid ah ay ka qaataan Tahriibayaasha Soomaalida ah ee soo gaaraya dalalka Yurub kuwaasi oo ka cararaya dhibaatooyinka ka jira dalka Soomaaliya.
2 responses to “Talyaaniga oo dalbaday in wax lagala qabto Qaxootiga Soomaalida”
ahmed hassan ismail
dadka ku nool dalka talyaniga waa dad aad uliita wax guuri ah mahaysta iyo shaqo wax lacuuno jiif sharci xuumo wax walba waa adaagyihiin ee wadamada yuruub dadka somalia ah haloo qaybiyo
waxan halkan aan fikradeyda uga dhiibanayan in shacabka somaaliyeed oo kunool talyaniga wax lagalaqabto yurub inteedakalena waa in ey kuraacaan waa dad dhibaateysaan